Kooxda Manchester City oo Berri oo Isniin ah ku dhawaaqaysa saxiix cusub … (Waa kee?) – Gool FM
(Manchester) 30 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay xaqiijin doonto saxiixa laacibka khadka dhexe ee naadiga Atletico Madrid ee Rodri berrito oo Isniin ah.
Man City ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inay u dhaqaaqi doonto soo xero-gelinta xiddigan xulka qaranka Spain labadii bilood ee la soo dhaafay, waxaana la fahamsan yahay in kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League ay kaga guuleysatay Bayern Munich saxiixa laacibkan.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa Waddanka Ingiriiska ayaa warinaya in kooxda uu hoggaamiyo macallin Pep Guardiola ay ku dhow dahay heshiiska 22-sano jirkaan, kaasoo ay Citizens ugu kici doona adduun dhan 62.5 milyan oo gini, taasoo ka yeeli doonta inuu noqon doono ciyaaryahanka ugu qaalisan taariikhda kooxdan.
Rodri ayaa dib ugu soo laabtay Atletico Madrid isagoo kaga yimid naadiga Villarreal xagaagii hore, waxaana uu u saftay 47 kulan kooxda ka dhisan caasimadda Spain intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii dhammaaday ee 2018-19.
Laacibkan khadka dhexe ayaa la sheegayaa inuu yahay mustaqbalka dheer ee bedelka ciyaaryahanka Man City ee Fernandinho kaasoo kooxda Sky Blue ku sugnaa muddo lix sanadood ah, laakiin waxa uu noqon doonaa 35 sano jir marka uu dhammaado xilli ciyaareedka 2019-20.
Kooxda ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ayaa sidoo kale la warinayaa inay tallaabo u qaadayso saxiixa ciyaaryahan Joao Cancelo, kaasoo ay kala soo wareegayaan naadiga Juventus.